Soo dejisan Retrica 2.3.3 – Vessoft
Soo dejisan Retrica
Retrica – software ah si ay u abuuraan oo saxaa sanamyadii isticmaalaya hababka iyo sida diirada kala duwan. Software waxaa dhisay-in in camera of qalab iyo u saamaxaaya in ay sawiro la lageystana, size of sawiro iyo sida diirada midab kala duwan ee waqtiga dhabta ah qaadan. Retrica ka kooban qalab si ay noola photos, rogaan Qaababka iyo qabsato nuurka, barbardhigo ama mudadda ay of image ah. Software waxa uu leeyahay awood u leeyahay inuu sawiro ku daro kala duwan ee logos, watermarks iyo geotags. Retrica sidoo kale u saamaxaaya in ay boostada ee photos socodsinayaa shabakadaha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Istagram.
Taageerada noocyada kala duwan iyo sida diirada
Abuurka oo ah sawiro
Waxay abuurtaa sawirrada
Boostada photos ee shabakadaha bulshada
Retrica Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Evernote 7.1.4
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... Tango 3.14.134034
العربية, English, Français, Español... Agar.io 1.3.1